आज मध्यरात देखि लागु हुदैँ निर्वाचन आचारसंहिता : के गर्न पाइन्छ/के पाइदैन ? (सूचीसहित) - केन्द्र खबर
आज मध्यरात देखि लागु हुदैँ निर्वाचन आचारसंहिता : के गर्न पाइन्छ/के पाइदैन ? (सूचीसहित)
२०७८ चैत्र २५ ०९:१९
स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब ३५ दिन बाँकी छ । आगामी बैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता आज मध्यरातिदेखि लागु हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगले आज मध्यरातिदेखि मतदानको दिनसम्म कार्यान्वयन हुने गरि आचार संहिता लागू गर्न लागेको हो । निर्वाचनमा सहभागि हुने दलहरुले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेका छन् ।
यद्यपि नेकपा एमालेले भने केही आचारसंहिता कानुन बाँझिने खालको रहेको भन्दै हिजो ६ बुदेँ लिखित असहमति पत्र आयोगलाई बुझाएको छ।
के गर्न पाइन्छ/के पाइदैन ?
आचारसंहिता लागु भएपछि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षमा भड्किलो प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन् । स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस, बैठक, भेला लगायतका काम गर्न पनि बर्जित हुन्छ । कुनै कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टा अगाडि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
दलको निर्वाचन चिह्न, झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट, झोला लगायत पनि बोक्न हुँदैन । तर उम्मेदवारले ‘ए–फोर’ आकारको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण खुलाएर वितरण गर्न भने मिल्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइनेछ ।